Push Fix 1.0 - Isisombululo kwingxaki ngeYouTube kunye neGPS emva kokufaka iBlactra1n RC3 | IPhone iindaba
iberllin | | Ihlaziywe 05/11/2009 23:47 | Iapps zokusebenza, Cydia
Push Lungisa, sisiqwenga esisombulula ingxaki ye- Hayi ukusebenza kwe YouTube kunye IGPS emva kokugqitywa kwe Jailbreak nge IBlackra1n RC3.
Ukuze uyifake, kuya kufuneka ukuba uyenzile Jailbreak.
Yifumane kwiCydia, yifake kwi-iphone kwaye uqalise kabusha iphone.
Xa iqala kwakhona iya kufakelwa kwaye ingxaki nge-YouTube kunye neGPS isonjululwe.
Push Fix, yinto eluncedo simahla enokukhutshelwa kwicandelo "BeYoIP Apps" kusuka Cydia o obandayo ngokugcina YibaYakhoiPhone.
Ukuba indawo yokugcina ayifakwanga kwisixhobo, yongeza lo mthombo ulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » Cydia » Push Fix 1.0-Isisombululo kwingxaki ngeYouTube kunye neGPS emva kokufaka iBlactra1n RC3
Ikhutshelwe kwaye ifakwe. SISOMBULULA iingxaki. Ndiyabulela kakhulu. Ukubulisa
Umbuzo omnye, ngaba oko kwenzeka kuphela nge-iPhone okanye ikwachukumisa ipod? Kuba andikalayishi ku-3.1.2!
Into enye. Ngaba ikhona into oyaziyo kwiifowuni ezintsha nge-iboot entsha? Ngaba ufaka i-blackra1n kunye ne-blacksn0w kwaye uqalise kwakhona okanye ibhetri yakho iphela, uyibeka kwifowuni imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, i-iTunes kunye nekhebula kunye nokuvalelisa ekusebenzeni kwaye uphinda inkqubo ...
U-Ojito, izolo ndiyifakile le kunye nesiphelo senditena. Kwafuneka ndibuyisele ifemu ngokuyibeka kwakhona nge-itunes kwaye kucacile ukuba ndilahlekelwe yiyo yonke into.
Kwakuqala kwakhona ..
Kwaye ndiyongeza, emva koko ndayijika kwakhona kwaye i-youtube kunye ne-wifi zisebenza ngokugqibeleleyo. Emva koko ndiza kuvavanya iGPS. Inqabile kakhulu kodwa ubuncinci ndiyishiye kakuhle: S (ndicinga)
isombulula iingxaki zokutyhala ngenxa yokuqhekeka kwejele nge-blackrain kuphela okanye iyasebenza nakwabanye, oko kukuthi, kwiifama zesiko ezinesiphene okanye i-redsn0w ???
Andazi kuba andinangxaki yakho.
kodwa kufuneka uzame ukuba wazi ngokuqinisekileyo
EYE! kwiCydia zimbini: Push Fix kunye nePush Notification Fix. Ngeyokuqala ayisebenzi kum, (kwaye ndiyizamile amatyeli aliqela). Ngowesibini ewe. Ukuba kuyenzeka komnye umntu, faka i-Push Notification Fix
Molweni bantu, ninjani? Kulungile ndibeke le ndawo ingasentla, kodwa ndinenye ingxaki, andazi ukuba uqaphele, kodwa ndiphantse ndasebenzisa i-iPhone ukurekhoda ngokunjalo kwaye ingxaki kukuba ayirekhodi ngaphezulu kwe-35 min !! Kwaye ndiyayidinga kangange-50 okanye iyure e-1 amaxesha amaninzi. !! Ngaba ikhona into yokulungisa le ngxaki?
IPd: ayikuko ngenxa yokunqongophala kwendawo apho ndingakwaziyo ukurekhoda kuba ndine-6 ​​okanye i-7 GB yasimahla… Enkosi kakhulu ..
Isebenze kakuhle kum… ndilandela nje imiyalelo…
NDIYAWONGEZA: Ndizamile kwakhona kwaye eyona isebenza ngokwenene yi-Push Notification Fix.Ufaka iipassword kwiiakhawunti zakho ze-imeyile kunye neWi-Fi yakho (kuba icwangcisiwe) yiyo ke leyo. Ndiyathemba ukuba iyanceda.
Uxolo, kodwa uyifumene phi i-Push Notification Fix, ndifumene i-Push Fix kuqala!
Ndiyilungisile i-baseband kodwa njengoko bendisoyika ngoku i-Push ayisebenzi kum! Andazi ukuba kufanele ukuba kungenxa yokuba kuye kwafuneka ndifake iPush Fix ye-Youtube ukuze isebenzele mna. Andazi ukuba sisizathu sokuLungiswa okanye ukukhutshwa, naziphi na iingcebiso?
Kwabo basebenzise le nkqubo, ungandixelela ukuba kuye kwafuneka ufake iPush Fix?
Ndidinga uncedo!!! Wonke umntu undixelele ukuba izakusebenza kum kwaye ekugqibeleni ayisebenzi!
UWilliam dena sitsho
isuka eMexico ... yalungiswa ngaphandle kokufaka kwakhona iiapps ngePush kwaye yayiPushfix okokuqala 🙂 ukubulisa
Phendula guillermo dena
Ndiyalungisa !!! Ndiyenzile kwakhona kwaye ngoku yonke into isebenza ngokugqibeleleyo! NdinePush kwakhona !!!!
Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela !!!
Ndilufumana njani ulungiso lwezaziso?
Xa ulungiso lokutyhala lwaphuma kwakudala xa ipush yalahleka xa kuqhekezwa intolongo ngokwenza ukuba ifowuni isebenze, kwabakho intetho eninzi malunga nomcimbi kwaye kwathiwa eli qhekeza lenza ibhetri inyibilike isihogo sonke.
Ngaba ukhe wajonga ukuba oku kuyenzeka okanye iyasebenza ifowuni?
Jonga imeko: Uhlaziyo luvela kwi icon ye-cydia. Ihlala i-Push Notification Fix kwaye nokuba ndiyihlaziya kangakanani, ihlala ibonakala kum. Qala kabusha iphone kwaye iqhubeka nokuvela. Ukuba ndiyikhupha, i-youtube ayisebenzeli mna. Ndifuna ukwazi. Kukhona into engalunganga. Kuya kufuneka ndiqhele ukumbona apho kwaye iphelele apho. Ndiqaphele ukuba okoko ndonyusele ku-3.1.2 isandi siyasilela ngamanye amaxesha.
Ukucofa kunye nokutyhala izaziso ezifakiweyo kwaye andikabinayo i-wifi. Eminye ngokugqibeleleyo, ndingenza ntoni?
Ukubulisa. elihle okokuqala ..
Phendula ku sqraulce@hotmail.com
Ngaba uqaphele ukuba uqwalaselo lweWi-Fi kwi-iPhone luchanekile?
kunamaxesha amaninzi okutshintsha
NDIFUNA UKUFAKA I-REPO UKUKHUTHALE I-PUSH FIX okanye ndityhale izaziso kuba andinayo KANYE NDINIKA ISIPHOSO "SOKUNGENAKHO UKUFUMANA UMTHOMBO" Ndizamile kathathu kwaye ithi ngokuqinisekileyo ayihambelani noCydia Kwaye kufuneka ndiqinisekise ukuba isuka kwi-Icy .. ukuba kufuneka ndinxibelelane noMlobi..MR Saurik… HAHAHA
Ndicacisa ukuba ndise-Itali ... kwaye ndiyenzile le Jailbreak http://www.iphoneitalia.com/rilasciato-blackra1n-rc3-ecco-la-guida-per-il-jailbreak-e-lo-sblocco-della-baseband-05-11-07-su-iphone-3g3gs-e-delliphone-2g-63974.html
kuba eyakho khange yenzeke kum ... ndiyathetha, bendizamile kanye ngeveki ukusukela kwiminyaka emi-1 eyadlulayo kwaye andinakuqhubeka ... ndikhangela, ndiyifumene ndazama le khokelo, ndafaka i-cydia kwaye ndisebenzisa yonke imisebenzi Ngaphandle kwe "3g kunye neInternet Ukwabelana" ezingasebenziyo njengangaphambili ...
Ndijonge i-repo enika izimvo "ngoku" kwaye isebenza ngokuchanekileyo
Inyani yile yokuba sele ineentsuku ezingama-2-3 ngaphandle kokusebenza kakuhle ukuba repo kunye nezinye, zama kwakhona
Yifake kwaye uyilungise i-GRAX XP efanelekileyo
ozifakileyo zombini, okanye ulungise kuphela izaziso zoTsalo
kwaye ndiyifaka njani i-psush fix okanye iPush Notification Fix ??, ngaphandle kwe-wifi
Ndizamile le dilesi (emva kokuhamba kakhulu):
Ndenze amanyathelo ebendibuze kuwo (kuba andinayo i-mac), bathi kulula ukuyenza ngePnwange 3.xx .. kwaye okubi kakhulu, luhlobo oluthile lonxibelelwano lweWi-Fi… Eyona ndawo ikude kwiplanethi). aaa enye into, ndifake i-firmware yesiqhelo (ndicinga ukuba yenye ye-berllin yakho yesiko esele ifikile nge-jailbreak kwaye ukusuka apho ndenza amanyathelo kwiphepha ebendilikhankanyile ngaphambili).
kodwa kuphela ngumsebenzisi ofunyenweyo, ithambo, kuphela igama lomsebenzisi «movistar» livela kwimeko yam (ndibeka i-chip evela komnye umqhubi «PORTA» kwaye khange ndiyifumane), kwaye ndashiywa ngaphandle komnxeba ( Nditsho ne-opharetha yomqhubi), nokuba i-wifi ayenziwanga yasebenza, okanye i-3g ... ndiyotyiwe, ndiphelelwe kukukhangela,
IPhone 3g 3.1.2 05.11.07 ecuador
Enye into, okoko ndafaka i-chip ye-movistar, ayizange indinike mqondiso, kuphela ligama lomqhubi elibonayo.
Beka i-itunes firmware esemthethweni emva koko uyigqithise kuyo iBlacra1n. KukwiBhlog sebenzisa injini yokukhangela
Masibone kodwa okokuqala ndiyacacisa:
1. ndibeka i-firmware yesiko 3.1.2
2.ngokulahla iNdlela / yabucala / var / ingcambu / iMedia. apho yenza ifolda «Cydia»
4. ngaphakathi «Cydia» yenza iFolder «AutoInstall»
5. Ndibeka ifayile ye blacksnow.deb apho.
kwaye ndiyifumene kuba bendikhangela inkqubo ethile yokukhupha kwi-pc ngaphandle kwe-wifi….
kodwa nadaaaa, soo ndihlala njengoko benditshilo ngaphambili.
kwaye andazi ukuba ndingayenza njani ukuba andinayo i-wifi ...
iberllin ayuuuuuuudaaaaa ...
Ngaphandle kwe-wifi andazi ukuba ungayifaka njani
NDIDINGA UNCEDO OLUNGXAMISEKILEYO NGALO LONKE IXESHA LAM I-IPOD TOUCH VERSION 3.1.2 NDIPHINDE NDIBELELE KWISIBHEDLELE SOKUBUYISELWA KWAKHONA KUNYE NOKUBA NDIQINISE IBACKACKRAN KWAKHONA, UKUYEKA IPODI EQHELEKILEYO, NDIDINGA UNCEDO LWAKHO NDIKhe NDazama UKUFAKA I-PUSH ISAZISO LUNGISELELA AND ASIYEKI NDODWA NJENGOKO SISENZA UKUFAKWA EMVA KOKUQALISA UKUQALISWA KWE-CYDIA ISICELO SAM UKUZE NDENZE UHLAZIYO KUTSHINTSHO LOKUFUMANEKA KUNYE NAMAXESHA AMANINZI ASIVUMELE NDIBEKE UMNTU NGAMNYE ANGANGENZA IYUDAR UKUSUSELA. Ndizamile ngeendlela eziliwaka zokulungisa le ngxaki kwaye andikwazi ukundishiya, bangandinceda
ENKOSI, UKUTSHINTSHA I-PUSH FIX SIVULA I-CYDIA SIYA KWI-SOURCES ESONGEZA IDILESI http://repo.beyouriphone.com/, xa songeziwe sijonge ukulungiswa kwe-push, ukuyifaka kwaye ukuqala kabusha iphone kwaye kunjalo.
kubonakala ngathi http://repo.beyouriphone.com phantsi kwaye ayisebenzi, nawuphi na omnye umthombo?
Isebenza ngaphandle kweengxaki ngalo mzuzu.
Ngamanye amaxesha banokuwa kodwa kwiiyure ezimbalwa kusonjululwe
enkosi utata wayedinga ulwazi yonke isonjululwe !!!
UDiego Munoz sitsho
Ukusuka eMexico, kundisebenzele okokuqala! NDIBULELA KAKHULU. Imibuliso kubo bonke
Phendula u-Diego Muñoz
Molo, ndinamathandabuzo okuba ndiyifakile na le iPhone 3GS 16GB 3.1.2 nge iBoot 359.3.2 (iBoot entsha). Ukuba ne-iBoot entsha, njengoko nisazi nonke, kufuneka ndiqalele kwakhona i-terminal kwikhompyuter nge-blackra1n. Ukuba ndiyayifaka "Push Fix", xa ndigqiba ukuyifaka, iya kundicela ukuba ndiqalele i-terminal. Nanku ke lo mbuzo wam: njengokuba ifowuni iqala kwakhona kwaye ke kufuneka ndenze iblackra1n kwakhona, ngaba "ukutyhala okulungisiweyo" kuya kundisebenzela xa ndenza iblackra1n kwakhona? Ukuba kukho nabani na ozamile nge-iBoot entsha, nceda undixelele. Enkosi!
Xa iphone iqala kwakhona, iphone iya kujinga kwiscreen ngediski kunye nentambo.
Ukugqitha iBlacKra1n kwakhona:
- qhagamshela iphone kwikhompyuter
-Vula uMhlophe kwaye wamkele iibhena ezi-1 eziphumayo.
-Malunga nemizuzwana engama-30 uyakube uyenzile kwakhona
QAPHELA: ukuba ufumana uphawu lwe-itunes, ungaluhoyi kwaye uluvale.
Enkosi berllin, kodwa le blackra1n besele siyazi ukuba yenziwa njani. Umbuzo wam ibikukuba emva kokufaka i-Push Fix kunye ne-blackra1n ifowuni kwakhona, i-YouTube, iGPS, njl. Ndiyathetha, nje ukuba ufake iPush Fix, awukhathali ukuqhuba i-blackra1n ngamanye amaxesha? Ngaba i-Push Fix isasebenza?
Enkosi kakhulu ibiluncedo olukhulu, kuba ndine iphone yam
Ukuba iyakusebenzela xa uyifaka, ihlala isebenza ngonaphakade xa udlulisa iBlackra1n kuyo.
Kodwa oko ngomzuzu omnye ubunokuzama
Isebenza kunye neROCK (enye into yokufaka iphakheji), yongeza nje i-repo kwaye ukhangele iphakheji.
kukho ulungiso olutsha lokutyhala. kuba kwindawo yokugcina ebonakalayo apha ayiveli
ikofu nje sitsho
Molo ulungile, ndine-iPhone 3GS 16gb 3.1.2 kwaye ndiyaqhubeka nokuba neengxaki ngeYouTube kunye neGPS, sele ndiyifakile i-push fix ngemithombo eliqela ye-cydia, kodwa xa ndiqala kwakhona kufuneka ndigqithe i-balckra1n kwakhona (ilogo ivela kum itunes kunye nentambo ye-usb), ndiyayenza kwaye akukho nto ndiyenzayo ngaphandle kwe-youtube kwaye kubi, ngaphandle kwegps.Ndicela uncedo.Nge-WIFI kwakungekho ngxaki ukubuyisela useto lwenethiwekhi
Andilufumani ulungiso lokutyhala naphi na, alubonakali kuyo nayiphi na into ekhoyo .. kutheni?
Ndine-iphone 2g ene-jalibreak .. ndiyi-youtube engandisebenzeliyo .. i´ma incinci njenge ... ngemini yakhe ndafumana i-push fix i ye-fabula, kodwa ityhubhu »yifomathile Yonke into, iphone ye0 Ngoku andiyifumani emhlabeni kaThixo indlela yokubukela iYouTube.
umntu ugcina into?
Andifumani kulungiswa kwePush kuwo nawuphi na umthombo endiwufakileyo
Ndine-iphone 3g enenguqulo 3.1.3 kunye ne-baseband 5.12.01… ndiyiphule nge-redsnow kwaye ngoku bendifuna ukuyikhulula kodwa andinayo indibaniselwano ye-intanethi… kuba andina sim yokuqala. ndikwazile ukuvavanya ukuba iyasebenza neqela le-3g…. kunye ne-wifi nangona ibona imigca engenazingcingo kwaye ithi ukuba idityaniswe xa ndivula i-cydia indixelela ukuba akukho nxibelelwano lwe-intanethi kwaye kwenzeka into efanayo nge-safari ...
Ke ndibambekile apha nge-iPhone ngaphandle kokusebenzisa nokuba ngumnxeba okanye i-intanethi!
Nceda uncede, andazi ukuba ndenzeni, kudala ndizama ukuyilungisa ...
Imibuliso kunye nemibulelo kwangaphambili…
Indawo esele ikhankanyiwe ayisebenzi, ndizamile iintsuku ezininzi kwaye ihlala ivelisa impazamo efanayo xa uzama ukongeza kwi-cydia ~ khange ufumane indawo yokugcina izinto ~, nceda uncede, Enkosi
Ingxaki yam yile ilandelayo: i-youtube iyadibanisa kodwa iividiyo azilayishi zigqibe ixesha elininzi kwaye ngamanye amaxesha uqhagamshelo lwe-wifi lulahlekile. Ngaba le ndawo iza kundinceda ukulungisa le mpazamo?
calahorradeboedo -> Enkosi kakhulu nge-URL! 🙂
Le URL iphuma kum ukuba ayisebenzi kuba bayivalile okanye enye into efanayo, awazi ukuba yeyiphi esebenzayo?
Ndidinga i-repo entsha engasasebenziyo, nceda undincede
molo ... ungandixelela indlela elula yokulungisa i-youtube
kwabambalwa nge3G ukuba siyijikeleze i-gps nge-6.15 siza kufuna ukuzama oku
Andiyicofisi i-url, nceda, inomnye umthombo endinokubeka kuwo ukukhuphela i-Push fux. Enkosi!
URolando Lopez sitsho
cmdshft.ipwn.me/apt/ le yeyona ilungileyo ndizamile ukuyibulela uJose Maria
Phendula uRolando López